तापक्रम के हो, यो कसरी मापन गरिन्छ र यसको लागि के हो | नेटवर्क मौसम विज्ञान
तापक्रम के हो, यो कसरी मापन गरिन्छ र यसको लागि के हो?
मौसम विज्ञान, विज्ञान, मौसम परिवर्तन र इकोसिस्टमको अध्ययन र, सामान्यतया, दैनिक जीवनका लागि, तापक्रम थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ। तापक्रम एक भौतिक सम्पत्ति हो जुन नाप्न सकिन्छ र यसको उपयोगीता यस ग्रहका धेरै चीजहरू बुझ्नको लागि विशाल छ।
यो पनि एक महत्वपूर्ण मौसमविवात्मक चर मानिन्छ र त्यसैले हामी तापक्रम को सबै विशेषताहरु लाई जोड दिन जाँदैछौं। तापक्रम बारे तपाईले के जान्नु पर्छ?
1 तापमान र यसको महत्त्व
2 हामी कसरी तापक्रम मापन गर्छौं?
3 मौसम विज्ञानमा अधिकतम र न्यूनतम तापमान
4 कुन इकाईहरूमा हामी तापमान मापन गर्छौं?
5 हामी कसरी थाहा पाउँछौं कि हामी तापक्रम राम्रोसँग मापन गर्छौं?
तापमान र यसको महत्त्व
विश्वमा यो सबैलाई थाहा छ कि तापक्रम एक परिमाण हो जुन अधिक वातावरण को स्थिति वर्णन र व्याख्या गर्न प्रयोग गरिन्छ। समाचारमा, मौसमको बारेमा कुरा गर्दा, त्यहाँ हामी तापक्रममा समर्पित एक अनुभाग रहन्छ जुन हामीले लिनुपर्दछ, किनकि हाम्रो क्षेत्रको मौसम विज्ञानको अवस्थाको व्याख्या गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ। तापक्रम दिनभर परिवर्तन हुन्छ, यो बादल दिन, वा बतास संग, रातमा, एक मौसम देखि अर्को मौसम, बिभिन्न स्थानहरुमा, इत्यादिमा भिन्न हुन्छ। हामीसँग धेरै घण्टा सम्म समान र स्थिर तापमान कहिले हुँदैन।
कहिलेकाँही, हामी भेट्दछौं कि जाडोमा तापमान ० डिग्री सेल्सियस भन्दा तल जान्छ र गर्मीमा धेरै ठाउँमा (र बढ्दो विश्वव्यापी वार्मिंगको कारण) उनीहरू बढ्दछन् र 0० डिग्री सेल्सियस माथि राखिन्छन्। भौतिक विज्ञानमा, तापमानलाई एक मात्राको रूपमा वर्णन गरिएको छ जुन सम्बन्धित छ कणहरू छिटो द्रुत गतिमा जान्छ कि सार्न को लागी। यी कणहरू जति अधिक उत्तेजित हुन्छन्, तापमान उच्च हुन्छ। त्यसकारण हामी चिसो हुँदा हामी आफ्नो हातहरू खस्याउँछौं, किनकि हाम्रो छाला बनाउने कणहरूको निरन्तर घर्षण र आन्दोलनले तापक्रम बढाउँदछ र हामी न्यानो हुन्छौं।
हामी कसरी तापक्रम मापन गर्छौं?
तापक्रम मापन गर्न सक्षम हुन, हामीले आफैलाई सम्पत्तीमा आधारित गर्नुपर्दछ जुन ती वस्तुमा भएका परिवर्तनहरू परिवर्तन भएको छ। त्यो हो, भर्खर सम्म, तापक्रम पारा थर्मामिटरले नाप्यो, बढ्दो तापमानको साथ पारा धातुको विस्तारमा आधारित। यस प्रकारले डिग्री सेल्सियसको मापनमा हामी जान्न सक्दछौं हामी कति डिग्री तापमान हौं वा केही भौतिक हो।
पदार्थको गुणधर्ममा आधारित तापक्रम मापन गर्ने अन्य तरिकाहरू केहि सामग्रीहरूको विद्युतीय प्रतिरोधको विश्लेषण, शरीरको मात्रा, वस्तुको र color्ग आदि।
मौसम विज्ञानमा अधिकतम र न्यूनतम तापमान
मौसमविद्हरू प्राय: अधिकतम र न्यूनतम तापक्रमको कुरा गर्छन्। र यो मौसम विज्ञानमा कुरा गर्न धेरै सामान्य छ अधिकतम र न्यूनतम तापमान, समय अवधिमा रेकर्ड गरिएको उच्चतम र न्यूनतम मानहरूको, आदि। यी मापनको साथ, तापक्रम रेकर्डहरू सिर्जना गरिन्छ जुन एक क्षेत्रको मौसमको विशेषताहरु मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले मौसम मौसमको बारेमा कुरा गर्दा हामी मौसमविज्ञानको बारेमा कुरा गर्छौं र तापक्रम र ग्लोबल वार्मिंगको बारेमा कुरा गर्दा हामी मौसमको बारेमा कुरा गर्छौं।
यी चरम तापमान मापन गर्न, अधिकतम र न्यूनतम थर्मामीटर प्रयोग गरिन्छ।
अधिकतम थर्मामीटरमा एक साधारण थर्मामीटर हुन्छट्या the्की नजिकको भित्री भागमा टोकरी रहेको एउटा ट्यूबले: तापक्रम बढ्ने बित्तिकै ट्या in्कीमा पाराको विस्तारले चोकको बिरूद्धको प्रतिरोधलाई जित्न पर्याप्त बल दिन्छ। अर्कोतर्फ, जब तापक्रम खस्छ र पारा सम्झौताहरूको द्रव्यमान हुन्छ, स्तम्भ विच्छेद हुन्छ, त्यसैले अन्त्यमा, यसको स्वतन्त्र अन्त एकदम उन्नत स्थितिमा यसले समग्र अन्तरालमा कब्जा गरेको छ।
न्यूनतम थर्मामीटर रक्सी हो र यसको भित्र तरलमा डूबिएको तामचीनीको सूचकांक छ। जब तापमान बढ्छ, रक्सी ट्यूब र अनुक्रमणिकाको भित्ता बीच पार हुन्छ, र यो सर्दैन; अर्कोतर्फ, जब तापमान कम हुन्छ, मदिराले यसको पछाडि आन्दोलनमा सूचकांक भन्यो किनभने यो तरल छोड्दा धेरै ठूलो प्रतिरोधको सामना गर्दछ। अनुक्रमणिकाको स्थिति, तसर्थ, न्यूनतम तापमान पुग्यो।
कुन इकाईहरूमा हामी तापमान मापन गर्छौं?
लगभग सबै भौतिक परिमाणहरूमा मापनका विभिन्न इकाइहरू हुन्छन् जुन मापनमा तपाईं मापन गर्न चाहानुहुन्छ। तापक्रम अपवाद होईन त्यसैले हामीसँग तापक्रमका लागि मापनका तीन इकाईहरू छन्:
डिग्री सेल्सियस मा मापन (° C): यो १०० अन्तरालहरूमा नियमित विभाजन हुन्छ, जहाँ ० पानीको जमिन र १०० उमाल्ने बिन्दुसँग मिल्छ। यो डिग्री सेन्टीग्रेडमा अभिव्यक्त भएको छ र हामी एक प्रयोग गर्छौं।
फरेनहाइट स्केल (ºF): यो सामान्यतया संयुक्त राज्यमा प्रयोग गरिन्छ। थर्मामीटर º२ºF (०ºC सँग मिल्छ) र २१२ºF (१००ºC अनुरूप) बीचमा स्नातक गरिन्छ।
केल्विन स्केल (K): यो वैज्ञानिकहरु द्वारा सबै भन्दा बढी प्रयोग गरिएको स्केल हो। यो एक यस्तो स्केल हो जुन तापक्रमको नकारात्मक मान हुँदैन र यसको शून्य राज्यमा अवस्थित छ जहाँ सामग्री बनाउने कणहरू सर्दैनन्। पानीको उबलने पोइन्ट 373 273 के र फ्रिजिंग पोइन्ट २ 1 के बराबर हुन्छ। तसर्थ, केल्विन स्केलमा १ डिग्रीको परिवर्तन सेल्सियस स्केलमा १ डिग्रीको परिवर्तन जस्तै हो।
हामी कसरी थाहा पाउँछौं कि हामी तापक्रम राम्रोसँग मापन गर्छौं?
वायुको तापक्रम मापन गर्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मध्ये एक हो हामीलाई थाहा छ कि हामीले थर्मामिटर कहाँ राख्नुपर्दछ सही र सही तरिकाले तापक्रम मान मापन गर्न। हामीले राख्ने क्षेत्र र उचाईमा निर्भर गर्दै, यसले हामीलाई विभिन्न समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। उदाहरणको लागि, यदि हामी यसलाई भित्ताको नजिक राख्यौं भने, यसले यसको तापक्रम नाप्छ; यदि यो हावाको संपर्कमा पर्दछ भने यसले एक मान चिन्हित गर्दछ र यदि यसलाई सुरक्षित गरिएको छ भने यसले अर्कोमा चिन्ह लगाउँदछ; यदि यो सूर्यको प्रत्यक्ष कार्य अन्तर्गत छ भने, यसले सौर्य विकिरण ग्रहण गर्दछ र कुनै पनि हावाको मध्यस्थतामा तातो हुने छ, जुन तापक्रम हवाको भन्दा माथिल्लो तहको हुन्छ।
यी सबै समस्याहरूबाट बच्न र विश्वभरका मौसमविद्हरूले उनीहरूको नाप एक अर्कासँग तुलना गर्न सक्छन् र भरपर्दो तथ्या have्कहरू पाउन विश्व मौसम विज्ञान संगठनले विश्वका सबै देशहरूमा समान रूपमा तापक्रम मापन गर्न दिशानिर्देशहरू स्थापना गरेको छ। थर्मामिटरहरू तिनीहरूले हावा हाल्नु पर्छ, वर्षा र प्रत्यक्ष सौर्य विकिरणबाट सुरक्षित हुनुपर्दछ, र भूमिबाट निश्चित उचाईमा (ताकि दिनको समयमा पृथ्वीले ग्रहण गर्ने उर्जाले मापन परिमार्जन गर्दैन)।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा मौसम मौसममा तापक्रम केहि आधारभूत हो र यो तापक्रम रेकर्डको लागि धन्यवाद छ जुन ग्रहको जलवायुको डाटा प्राप्त गरिन्छ। मानिसहरूले उत्पादन गरिरहेका मौसममा भएका परिवर्तनहरू अवलोकन गरेर हामी सबैभन्दा बढी प्रभावित ठाउँमा कार्य गर्न सक्छौं।
यदि तपाइँ यो पनि जान्न चाहानुहुनुहुन्छ कि तापीय संवेदना कसरी गणना गरिन्छ, यहाँ क्लिक गर्न नहिचकिचाउनुहोस्:
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » तापक्रम के हो, यो कसरी मापन गरिन्छ र यसको लागि के हो?
नमस्कार, मलाई आश्चर्य छ कि जब म मौसम च्यानल वा समाचार देख्छु कि तापमान आज म्याड्रिड मा भएको छ, यो सबै स्टेशनहरु को एक औसत हो वा यो अधिकतम र न्यूनतम मापन एक हो। धन्यवाद
Siralf लाई जवाफ दिनुहोस्
वर्षा seasonतु केहि दिनहरू रहनेछ
सागरहरूको तापक्रम अपेक्षित भन्दा १%% बढी छ